Ciidamada Itoobiya waxay dalka u joogaan badaadinta Dowladda Federaalka
Wararkii: Khamiis Sept 13, 2007
Xaaji Cabdi Iimaan “Ciidamada Itoobiya waxay dalka u joogaan badaadinta Dowladda Federaalka”
Nin ganacsde ah oo xalay lagu dilay Xaafadda KPP ee degmada Hodan
Qodobadii ka soo baxay shirkii kooxda Xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya
C/nuur Darmaan oo sheegay in uu wado olole ka dhan ah Dowladda Federaalka
Cali Geedi iyo C/qaasim oo shalay shir albaabadu u xirnaayeen wada yeeshay
Ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland oo madaafiic isku weydaarsaday Aricaddeeye
Dad ku geeriyooday rasaas ay fureen Ciidamada Dowladda Federaalka…
Qaar ka mid ah Ilaalada Sheekh Aadan Madoobe oo ku dhaawacmay gaari la rogmaday
Shir aad loo soo abaabulay oo ay Gollaha sarre ee ONLF ku yeelatay Minneapolis, Minnesota
Xaaji Cabdi Iimaan Cumar oo ah Guddoomiyaha Golaha dhaqanka Beelaha Hawiye qaybtooda ka qaybgashay shirkii dib u heshiisiinta ee Muqdisho lagu soo gebagabeeyey oo shalay Hoteel Ramadaan kula hadlayey saxaafadda ayaa joogitaanka Ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya, waxa uu ku sheegay in tahay sidii ay u ilaalin lahaayeen Dowladda Federaalka oo uu tilmaamay in haddii ay dalka ka baxaan aysan Dowladda Federaalka ka sii shaqeyn kari dalka. Xaaji Cabdi Iimaan ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay badbaadinayaan Dowladd Federaalka, sidaa darteedna uu isagu aamisan yahay in gacan siinayaan Dowladda Federaalka. “Ciidamada Itoobiya waxay Soomaaliya u joogaan sidii ay Dowladda Federaalka ugu celin lahaayeen sii joogista dalka, maxaa yeelay Dowlado hore ayaa meel ay ka baxeen la garaneyn kadib markii ay ka hor yimaadeen dadku” ayuu yiri Xaaji Cabdi Iimaan oo sheegay in si taasi aysan u dhicin ay Ciidamada Itoobiya joogitaankooda keeni karto in Dowladdu sii shaqeyso.
Xaaji Cabdi Iimaan ayaa sheegay in Dowladihii ay madaxda ka ahaayeen Cali Mahdi, Caydiid, iyo C/qaasim dhamaantood ay ka shaqeyn waayeen kooxo iyagu aan dooneyn wax dowlad ah in ay ka dhisanto dalka Soomaaliya. Xaaji Cabdi Iimaan oo isagu horey u sheegay in ka tanaasulay mucaaradnimadiisii Dowladda Federaalka, Isla markaana ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee xarunta gaadiidka lagu soo gebagabeeyey ayaa sheegay in shirkaasi ay ka soo baxeen qodobo guulo ah oo la taaban karo, waxa uuna sidoo kale sheegay in garabkooda ay doonayaan in ay sameystaan xisbi mucaarad ah oo uu sheegay in yahay mid aan hubeysaneyn balse la doonayo in uu toosiyo ummadda Soomaaliyeed, isla markaana uu saxo qaladaadka ka dhex jira Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Dowladda Federaalka.
Xalay fiidkii ayaa Xaafadda KPP ee degmada Hodan waxaa lagu dilay nin ganacsade ahaa oo laga yaqaanay deegaankaasi.
Ninkaan oo magacbiisa lagu sheegay C/fitaax ayaa la sheegay in ay dilkiisa gaysteen kooxo ku hubeysanaa bistoolad oo dhowr xabadood ku dhiftay.
Markii uu dhacay falka dilka ah ee marxuumkaani loo gaystay ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamada Booliiska Dowladda Federaalka oo iyagu isku gamaadaay goobtaasi oo ay dad badan isugu soo baxeen.
Ciidamada Booliiska uma suuragelin in ay gacanta ku soo dhigaan raggii gaystay dilka marxuumkaan, basle waxay sheegeen mas’uuliyiinta saldhiga degmada Hodan in ay wadaan baaritaano ay ku doon doonayaan kooxihii gaystay dilka Marxuum C/fitaax. Ma ahan markii ugu horeysay oo dad rayid ah dil loogu gaysto Magaalada Muqdisho, waxaana horey dilala kala duwan loo gaystay dad isugu jiray ganacsato iyo Aqoonyahano, waxaana sidoo kale arrintaasi barba socda hawgalo ay wadaan ciidamada Dowladda Federaalka oo ay garab siinayaan ciidamada Itoobiya, iyagoo baadi goobaya walxaha qarxa, waxayna sheegeen in ay doonayaan in ay xasilooni ku soo dabalaan Muqdisho oo iyadu u muuqata meel ay ku sii xoogsadaan rabshaduhu ku sii badanayaan iyo waliba dhibaatooyinka dadka rayidka soo gaaraya.
Maalinii doraad ahayd ayaa shir waxaa uu Magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ugu soo gebagaboobay kooxda Xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa Dowladihii ka qaybgalay shirkaasi, Mareykanka, Tansaaniya, Talyaaniga, Sweden iyo Qaramada Midoobey, waxayna gebagabadiis shirkooda soo saareen qodob dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen, in taageero loo fidiyo ciidamada Caalamiga ah ee Midowga si ay dhaqsi ugu tagaan dalka Soomaaliya, in Dowladda Federaalka laga taageero dhinacyada dhaqaalaha iyo Ciidamada, in gargaar deg deg ah la gaarsiinyo dadka Soomaaliyeed ee ka baracay dagaalada Muqdisho ka dhacay ee gobalada dalka ku dhibaateysan.
Kooxda Xiriirka Caalamiga ah sidoo kale waxay kooxaha ka soo horjeeda Dowladda u soo jeediyeen, in ay la yimaadaan tanaasul si loo gaaro xal deg deg ah oo Soomaaliya arrinteena maslaxo u noqda, sidoo kale kooxdaaasi waxay taageertay qodobadii ka soo baxay shirkii Beelaha Soomaaliyeed ee Muqdisho horaan lagu soo gebagabeeyay, kaas oo ay sheegeen in ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo sal u noqon kara dib u heshiisiinta Soomaaliyeed.
Alpha Cumar Konari oo ah Guddoomiyaha Midowga Afrika oo isna shirakasi goob joog u ahaa ayaa ka codsaday Dowladihii shirkaasi ka qaybgalay in Xaaladda Soomaaliya il gaar ah lagu fiiriyo, isla markaana waxa uu dowladihii shirkaasi ka qaybgalay ku booriyey in la dardargeliyo hawlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya.
Siyaasiga C/nuur Axmed Darmaan oo Muqdisho si weyn looga yaqaano ayaa sheegay in uu ku hawlanaa olole dhanka Dibadda ah oo uu sheegay in ay ku saleysan yihiin sidii loola xisaabtami lahaa Dowladda Federaalka, isagoo tilmaamay inay sameystay waxyaabo bini’aadannimada ka baxsan, oo ay ka mid tahay xasuuq loo gaystay dad rayid ah oo aan waxba galabsan sida uu hadalka u dhigay.
C/Nuur Darmaan ayaa sheegay in dhowr dowladood oo ka tirdan Midowga Yurub iyo waliba Dowladda Mareykanka uu ka hadalayey arrimahaasi, isla markaana waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka laga xayiri doono dhamaan dhaqaalaha dibadda ka soo gala taas oo uu ku macneeyey in ay tahay mid aan u qalmin, maadaama sida uu sheegay in ay tacadiyo ka gaysatay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan Magaalada Muqdisho.
Ma jirt faahfaahin intaa dhaafsan oo uu C/nuur Darmaan ka bixiyey hadalkiisa, waxa uuna C/nuur Darmaan isagu horey taageerayaashiisa ugu doorteen Madaxweyne xiligii Dowladdii C/qaasim ee Magaalada Carabta ee dalkaa Jabuuti lagu soo aasaasay.
Ra’isul Wasaaraha Dowladda Federaalka Cali Max’ed Geedi iyo Madaxweynihii hore ee Dowladdii Tuulada Carta lagu dhisay C/qaasim Salaad Xasan ayaa shalay shir ay albaabadu u xirnaayeen ku yeeshay Hoyga uu C/qaasim ka degan Yahay magaalada Muqdisho.
Shirkaasi oo dhowr saacadood socday ayaa markii uu soo gebagaboobay waxaa hadal kooban siiyey saxaafadda C/qaasim Salaad Xasan, waxa uuna sheegay in dhamaan waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo Ra’isul Wasaare Geedi ku idlaadeen guul, waxa uuna C/qaasin ku tilmaamay Ra’isul Wasaare Geedi in uu yahay nin yahay nin mowqif wanaagsan leh, isla markaana C/qaasin ayaa carabka ku dhiftay in uu ku taageerayo mowqifkiisa, balse c/Qaasima faahfaahin dheeraad ah kama bixin wixii ay isaga iyo Cali Max’ed Geedi ka wada hadleen, sidoo kalana C/qaasim ayaa xusay in ay wanaagsan in dib u heshiisiinta Soomaaliyeed horey loo sii wado, isla markaana si gooni ah in ay isku arkaan xubnaha Dowladda kaga jira Beelaha Hawiye ay wanaagsanaan lahayd.
Warar hoose ayaa waxay sheegayaan in C/qaasim iyo Cali Max’ed Geedi isla soo qaadeen sidii dardar loo sii gelin lahaa dib u heshiisiinta Ummadda Soomaaliyeed iyo waliba sidii Dowladda Federaalka iyo Mucaaradka ka soo horjeeda kulan u wada qaadan lahaayeen.
Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi ayaa isagu maalmahan waxa uu wadaa dadaalo uu ku doonayo in mucaaradka uu kaga dhaadhiciyo in ay Dowladda Taageeraan, waxa uuna horey kulan dalka Jabuuti ugala soo qaatay Xaaji Abuukar Cumar Caddaani oo ka mid ahaa taageerayaashii Golahii Maxaakiimta Islaamiga ah.
Rasaas xoogan oo ay fureen ciidamada Dowladda Federaalka ee ku sugan Sugan Suuqa Xoolaha ayaa waxaa shalay ku geeriyooday saddex qof oo rayid ah iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale.
Rasaastan oo xooganeed ayaa timid kadib markii ciidamada Booliiska Dowladda Federaalka ee iyagu ku sugan deegaanka Gantaalaha ee Xaafadda Suuqa Xoolaha lala beegsaday gacmeed, kadibna ay iyana ku jawaabeen rasaas aan loom eel dayin, waxaana sidaas ku nafwaayeen saddexdaan qofood, iyadoo kuwii dhaawaca ahaana loola cararay Isbitaalada.
Deegaanka Suuqa Xoolaha ayaa waxaa maalmahan dambe ka taagnaa rabshada la xiriira qaraxyada iyo weerarada lagu hayo ciidamada Dowladda Federaalka oo iyana rasaas ku jawaabay taas oo waxyeelo ka soo gaarto dada rayid ah oo aan waxba galabsan oo iyagu deegaanadaasi degan, wallow ay jiraan kuwo kale oo iyana isaga barakacay deeganaadaasi oo ay ku soo noqnoqdeen Weerarada iyo qaraxyada ka dhanka ah Ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya ee iyagu fariisimaha ku leh degmada Heliwaa.
Qaraxii shalay ciidamada la beegsaday ayaan la garaneyn haddii ay jiraan askar wax ku noqotay, balse taliska ciidanka Booliiska, waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka soo gaaray qaraxaasi.
Ciidamada maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa la sheegay in ay shalay iska hor imaad ku dhex maray deegaanka Aricaddeeye oo 25Km u jira Magaalada Laascaanood ee Gobalka Sool. Labada ciidan oo iyagu masaafo isku jira ayaa la sheegay in ay isweydaarsadeen madaafiic kala duwan, lama garanayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi, mana jiraan labada dhinaca mas’uuliyiintooda wax ilaa iyo hada ka hadlay arrintaasi, Ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ayaa iyagu si hor fadhiya iyadoo horey dagaalo u dhex mareen.
Gaari noociisu ahaa Cabdi Bile oo ka mid ahaa Gawaaridda Guddoomiyaha Baarlamaanka oo shalay ku rogamaday Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 ka mid ah Illaalada Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheikh Aadan Max’ed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe).
Rogmashada gaariga ayaa lagu sheegay in ay timid kadib markii uu gaarigaasi xawaare saa’id ku socday, waxaana Dhaawaca Illaalada Guddoomiyaha la dhigay Isbitaalka Magaalada Baydyabo.
Waa markii ugu horeysay oo gaari ka mid ah Gawaarida Sheikh Aadan Madoobey intii uu guddoomiyenimada qabtay Rogmado oo ay ku dhaawacmaan qaar ka mid ah Illaaddiisa.
Maalinamadii sabtida ee aynu soo dhaafnay bishan septemberna ahayd 8, waxaa ka dhacay magaalada Minneapolis shir si heer sarre ah loo soo abaabulay oo ay ka soo qaybgaleen dad fara badan oo soomaalida reer ogadenia iyo soomaalida walaahooda ah ee xonimada jecel. Shirkan ayaa ahaa mid ay xubnaha Jabhada wadaniga xoroynta ogaadenia (JWXO) ee Minisota ay soo qaban-qaabiyeen.
Ujeedada shirku waxuu ahaa mid dadwaynaha reer ogaadeniya ay ku doonayaan in madaxda gollaha sarre ee Jabhadu uga war bixiso socdaaladii ay kusoo wareegeen wadanka maraykanka iyagoo kulama farabadan la soo yeeshay dhamaan jaaliyadaha reer ogaadenia ee inta ay wakhtigoodu gaadhsiiyay. Dr. Mohamed Siraad Doolaal, oo ah gudoomiyaha gollaha sarre ee ONLF ayaa si xiiso leh loo sugaahaya hadalkiisa iyo waxii uu kala soo kulmay khaasatan socdaalkiisii uu kutagay Washington DC.
Markii uu shirku furmay ayaa waxaa halkaa hadalo soo dhwayn ah ka soo jeediyay xubno dhalinyaro iyo hooyoon ah oo aad ugu faraxsanaa halka uu marayo halganka lagu xoraynayo ogaadenia iyagoo kula dardaarmay Dr. doolaal iyo xubnihii kale ee la socday in si wanaagsan loo dardar galiyo qabsoomidii shirwaynaha ururka.
Wax yar kabacdi waxaa haddalkii iyo khudbadii bilaabay DR. M S Doolaal. Waxaa lagu soo dhaweeyay sacab mashxarad iyo niyad wanaag. Doolaal waxuu ka warbixiyay waxyaabaha ay kala soo kulmaan Washington “US Department of State” iyo waxay isku afgarteen. Khudbadu waydheereed xikmadunu way farabadnayd balse waxaa ugu muhiimsanaa in dawlada maraykanku si fiican usoo dhaweeyay wafdiga JWXO IYAGOO BALANQAADYO FARABADAN OO ISUJIRA TAAGEERO IYO AQOONSI BUUXABA U SHEEGAY INAY LAGARAB ISTAAGAYAAN. Waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa xaalada qalafsan ee Ogadenia iyo guud ahaan geeska afrika iyo sidii waxlooga qaban lahaa iyo waliba qaabkii ay jabhadu u qabsan lahayd shirwaynaheedii kaas oo aan dhicin muddo eegga laga joogo 9 sanno.
Madaxda goobta ka hadashay waxay si dheer ugu dheeraadeen in loo baahan yahay in ururku qabsado shirwaynihiisii affar sanadlaha ahaa, iyo qaabkii looqaban lahaa. Golaha sarre ee Jabhadu waxay u xaqiijiyeen dadwaynaha in shirki qab soomidoono mudo saddex bilood illaa affar bilood gudahood ah.
Gabagabadii shirka waxaa jaaliyadii kobtaas isugu timid laga buuxiyay waraaqo “pledging money for the upcoming ONLF Conference” ay ku deeqayaan lacagtii shirka lagu qaban lahaa. Waxaana ugu danbayntii la isku raacay lagana balan qaaday wafdiga inay xaq tahay inaan sii wadno halganka taariikhiga ah ee lagu xoraynayo shacabwaynaha dolman ee Ogadenia.
Asad & Zakariye Xaaji
Shirka Asmara oo looga dhawaaqay: (Ururka dib u xoreynta iyo soo nooleynta Shacabka Soomaaliyeed)
.G/le C/Waaxid “Dadka la qabqabtay waxay ahaayeen kuwa
.Qaraxyo shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho
.Dagaal mar kale ka qarxay deegaanka Baar-Magoog
.Golaha Midnimada Beelaha Hawiye oo wax laga xumaado ku
Wararka oo dhan ka akhri halkan.... Sept 12
Af-hayeenka Baarlamaanka DFKMG oo 48-saac u qabtey 10-wasiir iyo kaabayaashii dowlada